About Us - Tianjin Shengxin Sports Badeecadaha Co., Ltd
Tianjin Shengxin Sports Badeecadaha Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2011, kaas oo ku takhasusay naqshadaynta iyo dhismaha goobaha isboortiga, iyo soo saarta qalab taam dibadda, garoonka kubadda cagta qafis, garoon multi-ujeedada, qalab isboorti dugsiga, barayay qalabka, basketball taagan, volleyball post, post badminton, post tennis, mesh ilaalinta dibadda iyo suunka go'doomin. Waxaan sidoo kale sameeyo karaan dhammaan noocyada kala duwan ee hay'adaha aan caadiga ahayn sida codsiga macaamiisha. Haddaba Shengxin ayaa xubin ka ah ee Shiinaha Sporting Badeecadaha Federation (CSGF), Shiinaha xafiisyada & Sporting Badeecadaha Association (CSSGA), China Qalabka Waxbarashada Industry Association (CEEIA), Tianjin Sporting Industry Association (TSIA), iyo sidoo kale qaybta agaasimaha School Sporting ah qalabka Branch Association ee CEEIA iyo Guddiga Professional qalabka Sporting in TSIA. Maareeyaha Guud ee Zhang Junyuan loo doortay agaasimaha taagan ee TSIA ah.
Ka dib 7 sano oo soo koraya, Shengxin Sports ayaa shirkadda saameynta badan Chinese Industry qalabka taam. Haddaba, our degaanka awoodda iyo warshad waa in booska koowaad ee Shiinaha. qalabaynta qalabka wax soo saarka waa in heer hoggaamineed in industry ee. Hadda waxaan nahay mid ka mid ah 10 shirkadood Top taas u hesho shahaado NSCC iyo heerka hoggaamineed ee Tianjin. Waqtigan xaadirka ah, waxyaabaha NSCC waa in ka badan 100 cayn oo ku jira heerka kheyraad in ka badan 40 shirkado shahaadada NSCC
horumarinta degdegga ah ee suuqa alaabta isboortiga siisa fursad u Shengxin Sports. Our dakhliga iibka ee 2017 ayaa in ka badan 100 million RMB. Shirkadda Our qorsheeyay si loo dardar-khariidad warshadaha, la kordhiyo wax soo saarka taxane oo si xooga loo kordhiyo dakhliga iibka ee 2018-2020.
Waxaan dhameystirnay ee 2018:
1.Xadka ilaa line-soo-saarka ah, meelaha wax soo saarka 20,000 oo mitir oo laba jibbaaran. Awoodda ay gaari karaan 180,000 oo gogo ', qiimaha wax soo saarka 180 million RMB.
2cusub ka dhisay warshad wax soo saarka qalab taam indoor gaari karto 60 milyan oo qiimaha wax soo saarka, sannaddii kowaad.
3. Invest 3 million RMB sanad kasta in ay iskaashi la xulka sare Taiwan RD for horumariyo wax soo saarka taam gudaha iyo dibadda ah taxane cusub, kaas oo aad u xoojiyo awoodda shirkadda ee naqshadaynta, wax soo saarka iyo innovating.
4.Built kooxda adeeg in ka badan 20 qof kadib iibka si ha distributers xor ma ka walwal iyo macaamiisha aw.
5.Introduced ee aalado alxanka lix dhidibka buuxda automatic-kaas oo ay ogaadaan kartaa alxanka 360 degree oo aan xagal dhintay iyo leexashada si toos ah. Qalabaynta The gaari karo 100%. Waxaan sidoo kale soo bandhigay qalab sare sida gaarka ah si toos ah maraya double-biraha ku xereen iyo line socodka rinjiyeynta, tiro biibiile gacanta Mashiinka goynta, iyo biibiilaha gacanta tiro laabaya mashiinka iyo wixii la mid ah. All qalabka sare, kuwaas oo si cad loo hagaajiyo alaabta oo tayo leh iyo hufnaan-soo-saarka iyo hoos u qiimaha wax soo saarka.
Haddaba maalgashiga guud ahaan waa 125 million RMB (dhulka iyo dhismaha workshop ku darin). aqbasho The go'an yahay 60 million RMB, caasimadda hadda waa 65 million RMB.
In ka sano ee soo socda, marka hore, waxaan rabnaa inaan samayno wax soo saarka caaqil marayo cilmi baarista ama soo bandhigid. Ma aha oo kaliya mashquulin suuqa bulk iibka, laakiin sidoo kale ka heli macaamiisha caadiga ah oo xiiso leh iyo tagaan qoysaska caadiga ah. Marka labaad, waxaan rabnaa in aan ku biiro in dhaqaalaha la wadaago si ballaadhan oo qoto dheer wadaagaan bonus ee siyaasadda taam qaranka. Rajaynaynaa in ay riixaan internetka, Kombuyuutarada daruur, xogta weyn, Internet wax oo taam qaranka wada koraya, ha technology caawin taam qaranka.
Our saddexdii sano ee qorshaynta waa sida Bufinkii,
2018, dakhliga iibka 180 million RMB, faa'iido 30 million RMB;
2019, dakhliga iibka 300 million RMB, faa'iido 50 million RMB;
2020, dakhliga iibka 500 million RMB, faa'iido 100 million RMB.
Annagu waxaannu noqon doonnaa in heerka hoggaamineed ka dib markii la gaaro bartilmaameedka!
Bishii September 2017, Shengxin Sports wada shaqeyn la leh Tianjin Youfa Steel tuuboyinka Group, taas oo ah mid ka mid ah "Top 500 Enterprises Chinese" in ka badan 12 sano, wada dhismaha Shengxin ku Sports cusub. iskaashiga The hagaajinaysaa dhismaha warshad cusub ee shirkadda, horumarka cusub sal-dhigida qalabka iyo waxyaabaha cusub.